उत्तम Tadalafil पाउडर (171596-29-5) चीन कारखाना
हामी चीन मा Tadalafil पाउडर को सबै भन्दा ठूलो निर्माता हो
Tadalafil पाउडर भिडियो
उत्पादन नाम Tadalafil पाउडर
रासायनिक नाम (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
ब्रान्ड NAME सीआईएलिस, एडसिरा
औषधि वर्ग PAH, PDE-5 इन्डिटरहरू; फास्फोमेस्टरएस - एक्सएनएक्सएक्स एंजाइम इनबिटर्स
कैस नम्बर 171596-29-5
आणविक Fओमला C22H19N3O4
आणविक Wआठ 389.4
Monoisotopic Mass 389.138 जी / mol
पिउने Point 298-300 ° C
Fपुनर्जन्म Point2℃
जैविक आधा-जीवन 17.5 घण्टा
रंग सेतो अफ व्हाइट क्रिस्टललाइन ठोस
Sभव्यता डीएमएसओ (२ mg डिग्री सेल्सियस मा mg 78 मिलीग्राम / मिलि), मिथेनोल, पानी (२ १ डिग्री सेल्सियस मा १ मिलिग्राम / मिलि), डिक्लोरोमेथेन, र इथेनॉल (२ १ डिग्री सेल्सियसमा <१ मिलिग्राम / एमएल) मा घुलनशील
Storage T➺ कोठाको तापमान 59 ° F र ° 86 ° F (१° ° C र °० ° C) बीचको भण्डार गर्नुहोस्। चिसो वा ओसिलो क्षेत्रमा यस औषधि भण्डारण नगर्नुहोस्।
Tadalafil Aपप्पेशन कच्चा तादाफाफिल पाउडर गोलियाँ, यौन कैंडी, सेक्स कफी, आदि।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सामान्य यौन उत्तेजना विकार हो जुन पुरुषहरु मा १ 52 बर्ष भन्दा माथिका ५२ प्रतिशत पुरुषहरुलाई प्रभावित गर्दछ, विश्वव्यापी। तीव्रता मा भिन्नता, स्तंभन दोष सामान्यतया penile रक्त वाहिकाहरु को लागी कम रक्त प्रवाह को कारण हो, जो एक निर्माण को उत्पादन मा मुख्य कदम हो।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक पुरा तरिकाले ब्यवस्थापन योग्य र निको हुने विकार हो बिभिन्न औषधिहरु को साथ पेनाइल रक्त वाहिकाहरु को पर्खाल मा विशेष एंजाइमहरु लाई लक्षित गरीरहेको छ। ED को लागी सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि मध्ये एक 17.5 घण्टा को एक आधा जीवन संग Tadalafil पाउडर हो।
Tadalafil पाउडर के हो?
Tadalafil पाउडर ड्रग्स को यौन उत्तेजक वर्ग संग सम्बन्धित छ किनकि यो १aबर्ष भन्दा माथिका पुरुषहरु को लागी डिजाइन गरीएको औषधि हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बाट पीडित। Tadalafil, वा (18R-trans) -6- (6-benzodioxol-1,3-yl) -5a-hexahydro-2,3,6,7,12,12-methyl-pyrazino [2 ＇, 1＇:2, 1,6] pyrido [3,4-b] indole-1,4-dione Sildenafil वा Viagra जस्तै एक औषधि हो, कार्य मा, तर संरचना मा फरक। Tadalafil पनी शक्ति मा सामान्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधि, Viagra, बाट फरक छ किनकि यो पछिल्लो भन्दा धेरै शक्तिशाली र कुशल छ।
Tadalafil पाउडर एक PDE5 अवरोध गर्ने औषधि हो, जसको मतलब यो छ कि यो PDE5 एन्जाइम penile रक्त वाहिकाहरु को चिकनी मांसपेशी कोषहरुमा पाईन्छ लक्षित छ। दबाइ को निरोधात्मक कार्य एन्जाइम को मुख्य उद्देश्य vasoconstriction, जो penile रक्त वाहिकाहरु मा, कम रक्त प्रवाह र फलस्वरूप erectile डिसफंक्शन को परिणाम को रूप मा पैदा गर्न को लागी धेरै फायदेमंद छ।
Tadalafil पाउडर Pharmax Lifesciences द्वारा निर्मित छ र मात्र स्तंभन दोष भन्दा बढी को उपचार को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। Tadalafil पाउडर पनि सौम्य prostatic hyperplasia र पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप बाट पीडित पुरुषहरु को लागी निर्धारित गरीन्छ। जे होस्, Tadalafil पाउडर पुरुष र महिलाहरु मा अन्य यौन उत्तेजना विकारहरु को उपचार मा अप्रभावी छ।
Tadalafil को रूपहरु
Tadalafil एक शक्तिशाली PDE5 अवरोधक हो, बिभिन्न रूपहरु र खुट्टाहरुमा उपलब्ध छ, बिरामीहरु को लागी यसको खपत सजिलो बनाउन। औषधि गोलियाँ वा कैप्सूल को रूप मा उपलब्ध छ, खुराक5मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, र 25 मिलीग्राम को साथ। यो नोट गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि Tadalafil को खुराक निर्माण कम्पनी मा आधारित फरक छ।
Tadalafil पाउडर रूप मा पनि उपलब्ध छ, यद्यपि यो ज्यादातर औद्योगिक उपयोग को लागी बेचीन्छ। यो Tadalafil पाउडर थोक किनमेल औषधि को यस रूप संग धेरै प्रसिद्ध भएको पछाडि मुख्य कारण हो। यो फारम सामान्यतया थोक आवश्यकता को आधारमा २५ किलो देखि ५० किलो सम्म कन्टेनरहरुमा बेचीन्छ।
Tadalafil पाउडर को लागी सामान्य खुराक, संग शुरू गर्न को लागी, १० मिलीग्राम छ। अधिकतम खुराक, २४ घण्टा भित्र, २० मिलीग्राम छ, र यो खुराक भन्दा बढि सिफारिश गरीएको छैन।
यो औषधि मानव उपभोग को लागी सुरक्षित छ किनकि यो एफडीए अनुमोदन र भारतीय, क्यानेडियन, अस्ट्रेलियन, र ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारीहरु बाट अनुमोदन प्राप्त गरीएको छ। एफडीए वर्ष 2002 मा Tadalafil चक्की को उपयोग अनुमोदित, र चाँडै पछि, tadalafil पाउडर को उपयोग एफडीए द्वारा अनुमोदित गरीएको थियो।
Tadalafil पाउडर निर्माता कारखाना अत्यधिक परिशुद्धता संग नुस्खा मात्र औषधि निर्माण गर्ने दाबी। निर्माताहरु लाई मानव सुरक्षा को लागी उच्चतम सम्मान छ, जो शक्ति, सुरक्षा, र अन्तिम उत्पादन को प्रभावकारिता मा प्रचुर मात्रा मा स्पष्ट गरीएको छ।
Tadalafil पाउडर कसरी काम गर्दछ?
Tadalafil पाउडर Tadalafil, एक PDE5 अवरोधक यौगिक हो कि शुरूमा अनुसन्धान र Sildenafil, एक समान यौगिक को खोज पछि GlaxoSmithKline द्वारा निर्मित गरीएको थियो। सिल्डेनाफिल, अर्कोतर्फ, सुरुमा एनजाइना र उच्च रक्तचाप को लागी एक उपचार को रूप मा अनुसन्धान गरीरहेको थियो तर अध्ययन को प्रारम्भिक चरणहरुमा असफल परिणाम पछि सम्पूर्ण अध्ययन खारेज गरीएको थियो। जे होस्, समीक्षा मा, यो पाईयो कि Sildenafil erections उत्पादन गर्न सक्षम हुन सक्छ यदि बिरामीहरु ठीक यौन उत्तेजित थिए।
Sildenafil एक PDE5 अवरोधक को रूप मा, GlaxoSmithKline Sildenafil को रूप मा कार्य को एक समान तंत्र संग यौगिकहरु मा एक विस्तृत श्रृंखला खोज प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे। यो अनुसन्धान को खोज र तब Tadalafil को विकास को लागी नेतृत्व गरियो।
Tadalafil एक शक्तिशाली PDE5 अवरोधक १.17.5.५ घन्टा को आधा जीवन संग लगभग hours hours घण्टा लाग्छ कि मानव शरीर को बाहिर पुरा तरिकाले खाली गर्न को लागी छ। जब साधारण नीलो गोली, Viagra, जो केवल ३ घन्टा को लागी ४ घन्टा को लागी प्रभावकारी को तुलना मा, Tadalafil शीर्ष मा बाहिर आउँछ।
दबाइ को कार्य को मुख्य तंत्र PDE5 एन्जाइम कि penile रक्त वाहिकाहरु को चिकनी मांसपेशी कोशिकाहरु मा उपस्थित छ अवरोध छ। यो एन्जाइम को निषेध vasodilation मा परिणाम र अन्ततः, रक्त वाहिकाहरु को माध्यम बाट रक्त को बहाव, जो कोष cavernosa द्वारा घेरिएका छन्। लिंग को यो मांसपेशी, जब बृद्धि रक्त प्रवाह द्वारा तनाव अन्तर्गत राखिएको छ, एक सीधा स्थिति मा दबाब छ, जो एक निर्माण को रूप मा उल्लेख गरीन्छ।
जे होस्, penile मांसपेशिहरु, corpus cavernosa सटीक हुन, शुरूमा आराम गर्न को लागी आवश्यक छ ताकि रक्त वाहिकाहरु फैलिन्छ र रगत को एक उच्च इनपुट प्राप्त गर्न सक्छ। चिकनी मांसपेशिहरु को यो विश्राम पनि PDE5 एंजाइम को अवरोध को प्रभाव हो, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूपमा। PDE5 को निषेध Guanosine MonoPhosphate वा GMP को मात्रा मा वृद्धि भयो, जो चिकनी मांसपेशिहरु को विश्राम को लागी महत्वपूर्ण छ, जस्तै corpus cavernosa।
जे होस्, त्यो मात्र प्रयोग र Tadalafil पाउडर को कार्य को संयन्त्र हैन। नुस्खा मात्र औषधि पनि सौम्य prostatic hyperplasia को लागी प्रयोग गरीन्छ, एक मूत्र विकार प्रोस्टेट ग्रंथि को विस्तार र दुखाइ पेशाब को रूप मा प्रस्तुत को कारण। बढेको प्रोस्टेट ग्रंथि को उपचार को लागी कार्य को संयन्त्र चिकनी मांसपेशी कोशिकाहरु मा जीएमपी को बृद्धि स्तर को माध्यम बाट हो। यी कोशिकाहरु को विश्राम को पेशाब को सजिलो बाटो को अनुमति दिन्छ र मूत्र प्रतिधारण र दुखाइ रोक्छ।
Tadalafil पाउडर पनि फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप को लागी निर्धारित छ, PDE5 अवरोध प्रभाव को रूप मा न केवल रक्त को बहाव बढ्छ तर रक्तचाप पनि कम हुन्छ, जो PAH को उपचार मा अत्यन्त लाभदायक छ।
Tadalafil पाउडर के को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ?
Tadalafil पाउडर निम्न शर्तहरु को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ:
पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप
जे होस् अनुसन्धान को लागी औषधि को नयाँ सम्भावित उपयोगहरु मा आयोजित गरीरहेको छ, वर्तमान मा यो केवल १ years बर्ष भन्दा माथिका पुरुषहरु लाई निर्धारित गर्न को लागी हो, माथि उल्लेखित विकारहरु मध्ये एक बाट पीडित। सबैभन्दा सामान्यतया, दबाइ स्तंभन दोष को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ।
Tadalafil पाउडर को लाभ
Tadalafil दुबै आफ्नै मा धेरै फाइदाहरु छन् र जब यौन उत्तेजक औषधिहरु को वर्ग संग सम्बन्धित अन्य PDE5 अवरोधकहरु को तुलना मा। यो दबाइ शक्तिशाली र लामो समय सम्म चल्ने छ किनकि यो ३ hours घण्टा लाग्छ प्रणाली बाट खाली गर्न को लागी, मात्र 36। घण्टा पछि वस्तुतः अनुपयोगी हुन। दबाइ को प्रभावहरु स्पष्ट र देखीन्छ लगभग २० मिनेट देखि minutes० मिनेट घूस पछि, र Tadalafil पाउडर को बारे मा ३ घण्टा देखि ४ घण्टा को लागी सक्रिय रहन्छ। यो उल्लेख गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि औषधि को गतिविधि कुनै पनी तरीका मा निर्माण को अवधि को बराबर छैन।
Tadalafil पाउडर सहज erections उत्पादन गर्न असमर्थ छ र उपयुक्त यौन उत्तेजना र उत्तेजना को लागी यो एक निर्माण मा प्रभावी हुन को लागी आवश्यक छ। यदि यौन उत्तेजना औषधि को घूस पछि चार घण्टा को दौरान प्रदान गरीन्छ, औषधि एक निर्माण उत्पादन र सीधा हुने समस्या को लक्षण कम गर्न सक्नुहुन्छ।
यो यौन उत्तेजक औषधि यसको कार्य को एक लामो संयन्त्र को परिणाम को रूप मा स्तंभन रोग को उपचार मा काफी प्रभावी छ, जो यो स्तंभन दोष र सौम्य prostatic hyperplasia बाट पीडित धेरै को लागी छनौट को औषधि बनाउँछ। Tadalafil पाउडर Tamulsin, सौम्य prostatic hyperplasia को उपचार को लागी अर्को शक्तिशाली औषधि संग संयुक्त हुन सक्छ यद्यपि यो औषधि मिश्रण को प्रभावकारिता अझै पनी अध्ययन र विश्लेषण गरीरहेको छ।
Tadalafil पाउडर को उचित खुराक
Tadalafil पाउडर, माथि उल्लेखित रूपमा, सामान्यतया बन्द गरीएको छ १० मिलीग्राम कम से कम खुराक को रूप मा। औषधि को उपयोग को कम्तीमा एक हप्ता पछि, खुराक कम गर्न सकिन्छ, बृद्धि, वा परिणाम को आधार मा एउटै स्तर मा राखिएको। जे होस्, यो मन मा राख्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि यो दबाइ एक नुस्खा मात्र औषधि हो कि मात्र प्रयोग गरीन्छ जब आवश्यक छ। यो पनी 10 घण्टा मा मात्र एक पटक प्रयोग गरिनु पर्छ ताकि औषधि को साइड इफेक्ट लाई बढाउन को लागी।
एक दबाइ को लागी एक छुट्याइएको खुराक को जोखिम जुन मात्र लिईन्छ जब जरूरी लगभग अस्तित्व छ तथापि, यो एक छुट्याइएको खुराक को लागी दिशानिर्देशहरु लाई स्पष्ट गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। यो किनभने औषधि दैनिक प्रयोग को लागी निर्धारित छ, कम्तीमा तीन पटक एक दिन जब फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप र सौम्य prostatic hyperplasia को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ। एक छुटेको खुराक को मामला मा, यो सबै भन्दा राम्रो छ कि खुराक बाट बच्न को लागी, र कुनै परिस्थिति मा एक छुटेको खुराक एक डबल खुराक संग अर्को पटक क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ। यो धेरै लामो र अवांछित प्रभावहरु को लागी लगभग घातक जटिलताहरु को परिणाम को संभावना छ कि नेतृत्व गर्न सक्छ।
कसले Tadalafil पाउडर को उपयोग गर्नु हुँदैन
Tadalafil पाउडर बिभिन्न फाइदाहरु र उपयोगहरु छन् तर यो विशेष गरी पुरुष लिंग को लागी विशेष गरी १ 18 बर्ष भन्दा माथिका ती डिजाइन गरीएको हो। औषधि महिलाहरु र बच्चाहरु द्वारा लिनु हुदैन किनकि उनीहरु Tadalafil पावर को उपयोग संग सम्बन्धित धेरै सामान्य साइड इफेक्ट र जटिलताहरु को विकास को उच्च जोखिम मा हुन सक्छ।
निम्न जनसंख्या Tadalafil पाउडर, वा PDE5 अवरोधक औषधि वर्ग संग सम्बन्धित कुनै पनि औषधि शुरू गर्नु अघि आफ्नो डाक्टर संग परामर्श लिनु हुँदैन।
पछिल्लो तीन महिना भित्र शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप को एक इतिहास संग मान्छे
पछिल्लो तीन महिना देखि छ महिना को लागी कार्डियक घटनाहरु को एक इतिहास संग मान्छे
उच्च रक्तचाप र hyperlipidemia संग मानिसहरु
मिर्गौला रोग संग मानिसहरु
Retinitis pigmentosa संग मानिसहरु
हेमोफिलिया वा यस्तै रक्त विकार संग मानिसहरु
धेरै myeloma, वा ल्युकेमिया संग मानिसहरु
पेट अल्सर संग मानिसहरु
स्ट्रोक को इतिहास संग वा एक स्ट्रोक पीडित को बढि जोखिम संग मान्छे
यी मानिसहरु Tadalafil लिन को लागी अनुमति छैन किनकि तिनीहरुको वर्तमान औषधिहरु लाई औषधि संग अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्, जीवन को लागी खतरा जटिलताहरु को परिणामस्वरूप। केहि अवस्थामा, यी बिरामीहरु को शरीर अपेक्षाकृत सामान्य र औषधिको गैर-गम्भीर साइड इफेक्ट को लागी अधिक संवेदनशील हुन सक्छ तर जटिलताहरु को तीव्रता सामान्य भन्दा अधिक हुन सक्छ।
Tadalafil पाउडर को सम्भावित साइड इफेक्ट
Tadalafil पाउडर, धेरैजसो औषधि जस्तै, धेरै सामान्य साइड इफेक्ट यसको उपयोग संग सम्बन्धित छ। जे होस्, ती मध्ये कुनै पनि गम्भीर, दैनिक जीवन गतिविधिहरु परिवर्तन, वा जीवन धम्की छन्। वास्तवमा, ती मध्ये धेरै जसो आफ्नै मा समाधान हुनेछ र चिकित्सा हस्तक्षेप को आवश्यकता पर्दैन।
Tadalafil को सामान्य साइड इफेक्ट मा शामिल छ, तर सीमित छैन:
फ्लशिंग; तातो र छाला को लाली
टिनिटस; कान मा लगातार घन्टी आवाज
पछिल्लो पक्ष प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर छ र एक लामो र दुखाइ निर्माण कि लामो समय सम्म रहन्छ, सामान्यतया चार घण्टा भन्दा बढी लाई बुझाउँछ। यस्तो स्थिति मा, यो तुरुन्त चिकित्सा सहायता खोज्न को लागी सिफारिश गरीन्छ किनकि यो एक अधिक गम्भीर, यद्यपि दुर्लभ, Tadalafil उपभोग को साइड इफेक्ट हो।
२०० of को अक्टोबर देखि, FDA लाई सबै PDE2007 अवरोधक औषधि कन्टेनरहरु लाई एक चेतावनी लेबल समावेश गर्न को लागी आवश्यक छ कि प्रयोगकर्ताहरुलाई थाहा छ कि यी औषधिहरु अस्थायी तर अचानक सुन्ने हानि को कारण हुन सक्छ। एफडीए द्वारा यो निर्णय Tadalafil वा एफडीए संग दर्ता गरीएको थियो कि समान औषधिहरु को उपयोग गरीरहेको बिरामीहरु मा सुन्ने हानि को धेरै उजुरी को परिणाम थियो, उनीहरु लाई मुद्दा को उचित विश्लेषण गर्न को लागी आवश्यक छ। एफडीए अनुसन्धान सुनेको हानि TAdalafil को एक गम्भीर पक्ष प्रभाव हो कि उनीहरु लाई विश्वास छ कि सबै बिरामीहरु लाई स्पष्ट शब्दहरुमा सजग गराउनु पर्छ, ताकि उनीहरु एक सूचित निर्णय गर्न सक्दछन्।
दृष्टि हानि अझै Tadalafil प्रयोग संग जोडिएको अर्को लगातार गुनासो थियो र जब एफडीए यी गुनासोहरुमा देखीयो, यो पाईयो कि यो साइड इफेक्ट ज्यादातर पहिले देखि नै एक आँखा रोग, अर्थात् गैर arteritic पूर्वकाल इस्केमिक ओप्टिक न्यूरोपैथी बाट पीडित बिरामीहरु मा हुने गरीरहेको थियो। चूंकि त्यहाँ कुनै सीधा कारण र एफडीए द्वारा पाईएको प्रभाव थियो, त्यहाँ Tadalafil पाउडर वा अन्य PDE5 अवरोधक प्याकिंग लेबल मा दृष्टि हानि संग सम्बन्धित कुनै चेतावनी लेबल छैन।
Tadalafil पाउडर संग सामान्य औषधि अन्तरक्रिया
केहि दबाइहरु लाई एक साथ लिनु हुदैन किनकि उनीहरु दुबै को प्रभाव मा कमी, दुबै को प्रभाव, वा दुबै औषधि को नकारात्मक प्रभाव को प्रवर्धन मा परिणामस्वरूप प्रत्येक संग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्।
Tadalafil पाउडर एक यस्तो औषधि हो कि निम्न औषधि संगै लिनु हुँदैन।
Antacids: यी दबाइहरु Tadalafil संग अन्तरक्रिया यस्तो कि उनीहरु पछि औषधि को दक्षता मा कमी को परिणाम हो, यद्यपि सटीक तंत्र अझै पनी बुझेको छैन। जे होस्, यो महत्वपूर्ण छ कि यी दुई औषधिहरु को बीच सम्भावित अन्तरक्रिया को बारे मा बिरामीहरुलाई सचेत गराउन, विशेष गरी को रूप मा पूर्व औषधि एक सामान्य घरेलु औषधि हो।
PDE5 अवरोधकहरु: Tadalafil को रूप मा कार्य को एक समान तंत्र संग औषधि को खपत रक्त को प्रवाह मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि र रक्तचाप मा एक जीवन धम्की कमी को परिणाम हुन सक्छ। दुई फरक PDE5 अवरोधकहरु मिश्रण वा एउटै औषधि को एक डबल खुराक ले अतिरिक्त लाभ को सट्टा जटिलताहरु को परिणाम हुन सक्छ।
रक्सी: अल्कोहल संग Tadalafil पाउडर ले कुनै विशेष जटिलता पैदा गर्न सक्दैन तर यो साइड इफेक्ट को तीव्रता मा एक ठूलो वृद्धि को परिणाम हुन सक्छ। ती घटना मा सामान्य हुन सक्छ तर जब तीव्र, असहनीय हुन सक्छ र चिकित्सा सहायता को आवश्यकता हुन सक्छ।
नाइट्रेट्स: यी औषधिहरु हृदय को प्रयोजनहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ र तिनीहरुको मुख्य कार्य उनीहरु मा एक vasodilatory प्रभाव गरेर रक्त वाहिकाहरु को माध्यम बाट रक्त को बहाव बढाउनु हो। कार्य को यो संयन्त्र Tadalafil को समान छ, यसैले दुई औषधि को संयोजन दुवै औषधि को नकारात्मक प्रभाव को एक अतिशयोक्ति मा परिणाम।
Anti Hypertensives: यसको कारण नाइट्रेट को रूप मा उस्तै छ। विरोधी hypertensives र Taladafil दुबै vasodilating जहाजहरु द्वारा रक्तचाप कम गर्न मा काम, जो एक साथ लिईयो भने, अत्यन्त कम रक्तचाप को परिणाम हुन सक्छ कि मृत्यु को परिणाम हुन सक्छ, यदि उपचार नगरी छोडियो।
CYP3A4 Inducers: CYP3A4 एन्जाइम हो शरीर बाट Tadalafil कम्पाउन्ड को उत्सर्जन को लागी यसको उद्देश्य पूरा गरे पछि। जे होस्, एक दबाइ कि यो एन्जाइम को प्रभाव बढ्छ फलस्वरूप Tadalafil को उत्सर्जन मा बृद्धि हुनेछ, यो पहिले नै यो आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम भएको छ। यो पछिल्लो अक्षम र बेकार रेन्डर गर्दछ।
CYP3A4 अवरोधकहरु: CYP3A4 एन्जाइम को कार्य लाई रोक्ने कुनै पनि औषधि Tadalafil को उत्सर्जन मा कमी आउछ जसले मानव प्रणाली मा आवश्यक भन्दा लामो समय सम्म छोड्नेछ। यो लामो प्रभाव अनावश्यक छ र समग्रमा धेरै खतरनाक हुन सक्ने क्षमता छ, यही कारण हो कि यी दुई को संयोजन सबै मूल्य बाट टाढा रहनु पर्छ।
Guanylate Cyclase Stimulators: यी दबाइहरु फेफड़ों को vasculature लक्षित, यो को माध्यम बाट बग्ने रक्त को दबाव लाई कम गर्न को लागी। जे होस्, त्यो पनि लाभदायक प्रभावहरु र Tadalafil को उपयोग को एक हो। यी दुईलाई सँगै लिएर अत्यन्त कम फुफ्फुसीय रक्तचाप को परिणाम हुन सक्छ, जो घातक हुन सक्छ यदि उचित र समयमै उपचार गर्न सकिएन।
Tadalafil पाउडर कहाँ बेचिन्छ?
Tadalafil पाउडर थोक व्यापार खुद्रा बिक्री को तुलना मा धेरै अधिक सामान्य छ किनकि यो सामान्यतया Tadalafil पाउडर निर्माता कारखाना बाट थोक मा खरिद गरीन्छ। सामान्यतया, यस्तो निजी प्रकृति को औषधि सामान्यतया अनलाइन किनेको छ किनकि यो विवेक र गोपनीयता संग बिरामीहरु कि उनीहरुलाई आवश्यक छ प्रदान गर्दछ। औषधि लगभग सबै स्थानीय र अनलाइन फार्मेसीहरु मा उपलब्ध छ तर बिरामीहरु लाई एक पर्ची को लागी यो किन्न को लागी सक्षम हुन आवश्यक छ।
थप चिकित्सा अनुसन्धान र जानकारी
Tadalafil लगातार अनुसन्धान गरीरहेको छ र दबाइ को कुनै पनि अन्य सम्भावित उपयोग को आकलन गर्न अध्ययन। Tadalafil धेरै फरक नुस्खा औषधिहरु मा प्रमुख यौगिक हो, सबै विभिन्न ब्रान्ड नामहरु को तहत बेचिएको छ, ज्यादातर यस्तो स्तंभन रोग, सौम्य prostatic hyperplasia, र फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप को रूप मा विकारहरु को लागी। जे होस्, त्यहाँ विभिन्न अध्ययनहरु छन् कि उनीहरुको पहिलो चरण मा देखाइएको छ कि Tadalafil, भविष्य मा, अन्य विकारहरु को लागी पनि निर्धारित गर्न सकिन्छ।
Tadalafil मा प्रदर्शन गरीरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्ययनहरु मध्ये एक यसको प्रभावकारिता र सुरक्षा मा केन्द्रित रोग बाट पीडित बिरामीहरु द्वारा दैनिक प्रयोग गरीन्छ भने। अध्ययन एक इन्डोनेसियाली स्वास्थ्य जर्नल मा प्रकाशित भएको थियो, र इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसहरु बाट साहित्य को शोधकर्ताहरु को विश्लेषण को आधार मा, यो निष्कर्ष निकालेको छ कि एक दिन एक पटक Tadalafil को उपयोग मात्र आवश्यक छ जब दबाइ को उपयोग को तुलना मा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को उपचार मा अधिक प्रभावकारी छ।
कारण यो अध्ययन यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लागी उपचार प्रोटोकॉल परिवर्तन गर्ने क्षमता छ। जे होस्, थप अध्ययनहरु को लागी प्रदर्शन योजनाहरु मा परिवर्तन गर्न सकिनु भन्दा पहिले प्रदर्शन गर्न को लागी आवश्यक छ।
Tadalafil मा अर्को अनुसन्धान सेक्स उत्तेजक औषधि repurpose, एकै वर्ग, vardenafil, एक हड्डी विकार को उपचार मा प्रयोग गर्न को लागी औषधि संगै repurpose गर्न को लागी। यहाँ हड्डी विकार विकारहरु लाई संकेत गर्दछ जहाँ ओस्टियोक्लास्ट वा हड्डी नष्ट गर्ने कोशिकाहरु एक उच्च गति मा र दक्षता संग ओस्टियोब्लास्ट वा हड्डी बनाउने कोशिकाहरु को काम को तुलना मा काम गरीरहेछन्। यो हड्डी मास को कमी मा परिणाम जो रोगी रोगजनक फ्रैक्चर को लागी संवेदनशील बनाउँछ।
अध्ययन को vivo चरण मा देखियो कि यी दुबै औषधिहरु न केवल osteoblasts को गतिविधि बढाउन सक्छ तर एक साथ osteoclasts को गतिविधि लाई कम गर्न सक्छ। औषधिहरु यो गर्न को लागी सक्षम छन् किनकि PDE5A मार्ग दुबै प्रकार को कोशिकाहरु को एक सन्तुलन को उत्पादन मा महत्वपूर्ण छ। एउटै बाटो के हो कि ड्रग्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन को उपचार को लागी लक्षित छ। यस अध्ययन को नेतृत्व गर्ने शोधकर्ताहरु द्वारा पशु मोडेलहरु मा vivo अवधारणाहरु को आवेदन पछि, यो पाईयो कि दुबै औषधिहरु एक स्वस्थ हड्डी मास को प्रबंधन को लागी व्यवहार्य विकल्प हुन्। जे होस्, थप अध्ययन मानव को हड्डी मास मा दुबै औषधिहरु को प्रभाव मा आयोजित गर्न को लागी आवश्यक छ।
एन्डोक्रिनोलोजी जर्नल मा प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण tadalafil उपचार को प्रभावकारिता तुलना, tamsulosin उपचार, र tamsulosin प्लस tadalafil उपचार मूत्रमार्ग पत्थर को निष्कासन सहायता मा। अध्ययन को उद्देश्य मात्र ureteral पत्थरी संग बिरामीहरु लाई मद्दत गर्न को लागी नयाँ संयोजन उपचार खोज्न को लागी थिएन तर यो पनि यी उपचार योजनाहरु को सुरक्षा को आकलन गर्न को लागी थियो।
एक्लै tadalafil को उपयोग वा tamsulosin संग tadalafil दुई विकल्पहरु थिए कि सबैभन्दा प्रभावकारी र कम से कम प्रतिकूल प्रभाव को उत्पादन को संभावना पाईयो। यसबाहेक, Tadalafil को एनाल्जेसिक प्रभाव दुखाइ कम गर्न सक्षम हुन सक्छ ureteral पत्थरी को अनुभव संग धेरै बिरामीहरु जबकि औषधि पनि प्रणाली बाट ढु्गा को निष्कासन गर्न मद्दत गर्दछ।